TxTFi: Kwado Shopify Reordering Via Text Message | Martech Zone
Re-ịtụgharị site na akpaghị aka ederede ederede dị ọnụ ala karịa ma dị irè karị iji nweta usoro nke abụọ ma ọ bụ nke atọ site na ndị ahịa gị dị. Kwụsị mkpọtụ niile - hapụ ndị ahịa gị ịtụ ebe na otu ha si enwe ahụ iru ala. Na TXTFi n'ihi na Shopify, ikwesighi ime ihe obula. Ọ na-akpaghị aka. Naanị tinye ya ma chefuo ya.
Iwu SMS maka Shopify
TXTFi plọg n'ime Shopify na-akpaghị aka ma rute ndị ahịa gị site na ozi ederede akpaaka iji nye arịrịọ dị nro iji nyeghachi iwu, niile site na ozi ederede. N'aka nke ya, onye ahịa gị nwere ike ịmepụta iwu ha ma tinye ihe n'ime mkparịta ụka ozi ederede ahụ.
Ozugbo emechara ya, TXTFi site na njikọ na-enye ndị ahịa ohere ịbanye na peeji ndenye ọpụpụ gị Shopify dị ugbu a. Niile ndị ahịa ga-eme bụ ụgwọ zuru oke - ọ bụ ya. Usoro ịkwụ ụgwọ na usoro ịkwụ ụgwọ niile na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ka ha si eme ugbu a.
TxTFi SMS Order Atụmatụ na Uru
Naanị ekwentị - Ndị ahịa na - aga n’ihu. Ide ederede na-eme ka ọ dị mfe, ngwa ngwa, dị mfe maka ha, na gị
Akpanyeghị aka - TXTFi Bot n'ụzọ zuru ezu interacts gị ahịa-kpamkpam akpaghị aka, ọ dịghị nduzi ma ọ bụ na-elekọta mkpa.
ncheta - Inye aka na-akpaghị aka na ndị na-anaghị anabata ozi; na-enye ndị ahịa ikike ịtọ ntọala.
Order otutu ngwaahịas - TXTFi Bot nwere ike ijikwa otu ma ọ bụ ọtụtụ ngwaahịa ngwa ngwa.
Ezubere Ozi - Na-akpaghị aka na-ebelata dabere na ngwakọ, ndenye aha, nwepu aha.
Ọpụpụ dị mfe - TXTFi na-eji ndenye ọpụpụ gị Shopify, na-ejuputa nkọwa niile. Ndị ahịa na-akwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ.
Banye maka TXTFi
Ngosi: Anyị bụ ndị mmekọ TXTFi.
Tags: ekwentị shopifyederede ederede ederedere-ịtụụlọ ahịakọmputa emsmerceSMS ijiederede ederedeNkechi
WordPress: Mepụta Sidebars na akpaghị aka maka ụdị ọ bụla